မင်္ဂလာ MartiGrid EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာမင်္ဂလာ MartiGrid EA ၏မင်္ဂလာ MartiGrid EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အကောင်းဆုံး Forex EA'S | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ် မင်္ဂလာ MartiGrid EA ၏ 1
ငွေကြေးစွမ်း: AUDUSD, EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDJPY နှင့် NZDUSD
ရရှိနိုင်ပါသည်မင်္ဂလာ MartiGrid ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး၏2ကွဲပြားခြားနားသော packages များအခုအချိန်မှာရှိပါတယ်:
မင်္ဂလာ MartiGrid EA ၏ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - ရေရှည်အကျိုးအမြတ်အတွက်အကောင်းဆုံး Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး
မင်္ဂလာ MartiGrid EA ၏ တစ်ဦးအကျိုးရှိ၏ FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး ထိုအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး မင်္ဂလာ Forex ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များအသင်း။
ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့ မင်္ဂလာ MartiGrid EA ၏ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းနှင့်အတူ martingale / ဇယားကွက်မဟာဗျူဟာကိုအသုံးပြုသည် သတင်း filter ကို။ ဤနည်းဗျူဟာအများဆုံးအာရုံစိုက်မှုလိုအပ်တယ်။ ဒါကြောင့် developer များကအကောင်းဆုံးတည်ငြိမ်မှုနှင့်အမြတ်အစွန်းအဘို့အ Metatrader 99.90 (MT4) တွင် 4% optimization အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ Forex EA ၏ အလွန်ခေတ်မီပြောင်းလဲနေသောခြေလှမ်းနှင့်အမြတ်အစွန်းကိုအသုံးပြုသည်။
Happy MartiGrid စက်ရုပ်ကိုတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူသည်။ သင် MT4 terminal ကိုပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကုန်သွယ်ရေးအစုစုကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
single-Pair ကိုအသုံးပြုမှု: လိုရန်လိုငွေကြေးကို pair တစုံကိုသုံးပါ GBPUSD သို့မဟုတ်ရှေးရိုးစွဲတဦးတည်းတူသော AUDUSD H1 ပေါ်မှာ။
multi-Pair ကိုအသုံးပြုမှု: multipairs အသုံးပြုရန် AUDUSD, EURUSD, EURJPY, USDJPY နှင့် NZDUSD နှင့် H1 မှထားကြ၏။
MartiGrid ရဲ့မင်္ဂလာ အကြီးမြတ်ဆုံးအားသာချက်: သည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ဒီအဖွင့်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စျေးကွက်မှ Adjust Forex စက်ရုပ် 2013 ကတည်းကနေဆဲအမြတ်အစွန်းသည်။ သငျသညျအပြည့်အဝထောက်ခံမှုရရှိရန်နှင့်အဖွဲ့သည်အစဉ်အမြဲသင့်ကိုကူညီပေးဖို့အဆင်သင့်ပါ!
မင်္ဂလာ MartiGrid EA ၏ သင်အောင်မြင်မြင်ချင်သူကိုကုန်သည်တွေအနေနဲ့ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ကတီထွင်ခဲ့သည်!
၏အသုံးပြုမှုကို Make မင်္ဂလာ MartiGrid EA ၏ နှင့်ရွှေသို့သင်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဖွင့်!
မည်သည့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲလွယ်ကူသောပိုက်ဆံဘာသည် မင်္ဂလာ MartiGrid EA ၏ အားလုံးအကြောင်းပါ။ ဘောင်, အကြေးခွံနှင့်သင့်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာကန့်သတ်သငျသညျပေးခဲ့ကြပြီးနောက်, စက်ရုပ်ကျော်ကြာနှင့်သင်တို့အဘို့အရောင်းအပေါငျးတို့သကိုင်တွယ်။ ဤသည်အဖြစ်ကောင်းစွာအခြားအရေးကြီးကိစ္စရပ်များပေါ်တွင်သင်၏စွမ်းအင်အာရုံစိုက်နေချိန်တွင်ထိန်းချုပ်မှုယူရန်သင့်အားခွင့်ပြုထားသည်။
အဆိုပါ EA ၏အပေါ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ် 24 /5ညဥ့်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းအမြတ်အစွန်းလဲလှယ်ခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေ။ သင်ကကို turn off မဟုတ်လျှင်ဒီတော့သင်ကတစ်ခုတည်းအကျိုးအမြတ်ကုန်သွယ်မှု option ကိုလက်လွတ်မည်မဟုတ်။
ကျွန်တော်တို့ကိုလူသားတွေအတွက်အမတူဘဲ မင်္ဂလာ MartiGrid EA ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုများကငျးမဲ့သည်နှင့်သာလုံးဝ Calculator ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးစွယ်-of-the-ယခုအချိန်တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချကြလိမ့်မည် တကယ်တော့ကအချက်အလက်များနဲ့ကိန်းဂဏန်းများ compile ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိတော့မည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုလမျး၌အရမသွားပါစေလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။
မင်္ဂလာ MartiGrid EA ၏ - ထရေးဒင်း Logic, Setup ကိုထိုအခြားလိုအပ်ချက်များအကြောင်း
မင်္ဂလာ MartiGrid EA ၏ အချို့သောနာရီအတွင်းအရောင်းအ, လာမယ့်စုံတွဲနာရီသို့မဟုတ်နေ့ရက်ကာလအဘို့စျေးနှုန်းညှနျကွားခပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီးဆုံးဖြတ်သည်။ ဒါ့အပြင်ဒီကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အန္တရာယ်များနှင့်နှစ်လိုဖွယ်အမြတ်အစွန်းနှင့်အတူကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။ အဆိုပါကုန်သွယ်မှုစနစ်ကြီးမြတ်အမြတ်အစွန်းရရှိမညျနှင့်နေ့တိုင်းအရောင်းအဖွင့်လှစ်။
အဆိုပါ EA ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများနှင့်သတင်း filter ကိုအတူ martingale / ဇယားကွက်မဟာဗျူဟာအသုံးပြုသည်။ ဤနည်းဗျူဟာအများဆုံးအာရုံစိုက်မှုလိုအပ်တယ်။ ထို့ကြောင့်ဖန်တီးသူကိုအကောင်းဆုံးတည်ငြိမ်မှုနှင့်အမြတ်အစွန်းအဘို့အ Metatrader အတွက် 99.90% optimization ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ EA ၏မင်္ဂလာ MartiGrid အလွန်ခေတ်မီပြောင်းလဲနေသောခြေလှမ်းနှင့်အမြတ်အစွန်းကိုအသုံးပြုသည်။
ဤ FX စက်ရုပ် အပေါ်အရောင်းအ AUDUSD, EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDJPY နှင့် NZDUSD ငွေကြေးအားလုံး။ terminal ကိုအတွက်အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေလိုအပ်ချက် 3000 အများကြီးသုံးပြီး $ 0.01 ဖြစ်သင့်သည်။
အရေးအပါဆုံး updates များကို
နယူး update ကို EA ၏မင်္ဂလာ MartiGrid v1.1
ပျော်ရွှင်သော MartiGrid v1.1 သည် Hour_of_trading_from မှအသစ်တစ်ခုကိုထပ်ပေါင်းထည့်လိုက်သည် - အရောင်းအ ၀ ယ်အတွက်အစနှင့်အဆုံးအချိန်ကိုသတ်မှတ်ထားသောနာရီများသို့သတ်မှတ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
နယူး update ကို EA ၏မင်္ဂလာ MartiGrid v1.2
အသစ်သောအပြင်အဆင်များကဆက်ပြောသည်: ProfitUSD (အမိန့်ကော်မရှင်နှင့်လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်တွေကို), Newsfilter, NewsFileNum
နယူး update ကို EA ၏မင်္ဂလာ MartiGrid v1.3
နယူး update ကို EA ၏မင်္ဂလာ MartiGrid v1.4
အသစ်သောအပြင်အဆင်များကဆက်ပြောသည်: MaxProfitUSD, MaxLossUSD, MaxProfitPerc, MaxLossPerc, ProfitOrdersBeforeNews
နယူး update ကို EA ၏ v1.5
ကဆက်ပြောသည် pair တစုံ AUDUSD အသစ်လက်စွဲအတိုင်း Default setting ဟာပြောင်းလဲသွားတယ်။
နယူး update ကို EA ၏ v1.6
နယူး update ကို EA ၏ v1.7
နယူး update ကို EA ၏ v1.7.1
ပြုပြင်ထားသော setting ကို Multipairs
နယူး update ကို EA ၏ v1.8
MT4 1170 တည်ဆောက်များအတွက် source code ကိုပြုပြင်မွမ်းမံ
အားလုံးနေ့ရက်ကာလအဘို့ကုန်သွယ်ရေးအချိန် Setup ကိုထည့်သွင်း
မင်္ဂလာ MartiGrid EA ၏ - သင်အောင်မြင်ရန်လိုအပ်သည့်တစ်ခုတည်းသော Forex Trading Software
ထိုအတူပျက်ကွက်အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်အခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပါတယ် မင်္ဂလာ MartiGrid EA ၏ ဒီကုန်သွယ် software ကိုအာမခံမယ့်များ၏ဖန်တီးသူဖြစ်သောကြောင့် 80% အောင်မြင်မှုနှုန်းထက်ကိုပိုပြီး နှင့်လည်းအတည်ပြုထားသောရလာဒ်များပေးလိမ့်မည်။
မင်္ဂလာ MartiGrid EA ၏ မယုံနိုင်စရာစျေးနှုန်း, ဆိုလိုသည်မှာသာ€ 209.30 မှာချက်ချင်းမရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မိတ္တူဖမ်းပြီးမှမစောင့်ကြဘူး!
အဆိုပါတရားဝင်မင်္ဂလာ MartiGrid EA ၏ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
EA ၏မင်္ဂလာ MartiGrid
EA ၏မင်္ဂလာ MartiGrid ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
မင်္ဂလာ MartiGrid ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
HAPPY MARTIGRID EA ၏ - BEST Multi-တွဲဖက် Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး performance UPDATE ထုတ်ပြန်ခဲ့သော: + 5.5% MONTHLY Return (အစစ်အမှန် TRADING ACCOUNT ကို!) ချစ်ခင်ရပါသောသူချင်း Forex ကုန်သည်, သတင်း! https://www.bestforexeas.com/happy-martigrid-ea-review/ မင်္ဂလာ MartiGrid EA ၏အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနေတဲ့အမြတ်အစွန်း FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသည်: ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူ Long-Term Profits တွေဒီနေရာမှာပိုပြီးသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆုကြေးငွေ Get များအတွက်အကောင်းဆုံး Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး - မင်္ဂလာ MartiGrid EA ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များ၏မင်္ဂလာ Forex အဖွဲ့။ ပထမဦးစွာအားလုံးမင်္ဂလာ MartiGrid EA ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းနှင့်သတင်း filter ကိုအတူ martingale / ဇယားကွက်မဟာဗျူဟာကိုအသုံးပြု၏။ ဤနည်းဗျူဟာအများဆုံးအာရုံစိုက်မှုလိုအပ်တယ်။ ဒါကြောင့် developer များကအကောင်းဆုံးတည်ငြိမ်မှုနှင့်အမြတ်အစွန်းအဘို့အ Metatrader 99.90 (MT4) တွင် 4% optimization အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ... ဆက္ဖတ္ရန္